T Shirt YeVarume, Male T-Shirt, Mukadzi T-Shirt, donje t shirt - Chiono
Tine makore angangoita gumi eruzivo kuti tibatsire vatengi vedu neyakajairika nguvo yavo hachizi zvido.
Hunhu itsika yedu, zvakare ndiyo yedu yekutanga. Isu tinogara tichishingirira musimboti we "Mutengi Chekutanga, Hunhu hwekutanga".
Isu tine timu dhizaini yenyanzvi, inogona kubatsira iwe kudhirowa mhedzisiro pikicha sekufunga kwako.
tsika hofisi yechikoro yunifomu yekotoni bhatani cust ...
Wholesale zvakachipa promotional tsika kumhanya 100 ...
tsika vakadzi Tri-sanganisa 50% polyester 25% ...
Nanchang Vision Garment Co, Ltd. iri muguta reNanchang, mudunhu reJiangxi, China. Isu tine yedu yekufekitori fekitori uye yekudhinda fekitori, iine makore angangoita gumi ezviitiko kubatsira vatengi vedu neyakajairika nguvo yavo yezvinodiwa zvigadzirwa, kupa yakasarudzika machira, tsika logo logo digitizing, kupisa kuchinjisa kudhinda, sublimation uye silika skrini yekudhinda. Hunhu itsika yedu, zvakare ndiyo yedu yekutanga. Isu tinogara tichishingirira musimboti we "Mutengi Chekutanga, Hutungamiriri Pakutanga".